ग्यास सिलिण्डर बैंक बनाउने अभियानमा समेत लागे धनुषाको क्लोथ बैंक, १० वटा सिलिण्डर प्रशासनलाई हस्तान्तरण गरे ।। चिकित्सकको निगरानी र परामर्श सेवा जारी -
ग्यास सिलिण्डर बैंक बनाउने अभियानमा समेत लागे धनुषाको क्लोथ बैंक, १० वटा सिलिण्डर प्रशासनलाई हस्तान्तरण गरे ।। चिकित्सकको निगरानी र परामर्श सेवा जारी
९ भाद्र २०७७, मंगलवार ११:२९ ९ भाद्र २०७७, मंगलवार ११:२९ ९ भाद्र २०७७, मंगलवार ११:२९ क्लोथ बैंक धनुषा, पोर्भटी संस्थाका अध्यक्ष डा. शैलेन्द्र झा, मनिष झा श्री ओम, राजिव झा
ग्यास सिलिण्डर बैंक बनाउने अभियानमा समेत लागेका क्लोथ बैंक धनुषाले थप १० वटा अक्सिजन सिलिन्डर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई हस्तान्तरण गरेको छ । काठमाण्डौंकोे किर्तीपुर–१ स्थित स्टेप टु इलिमिनेट पोर्भटी नामक संस्थाले सानो साइजको सो १० थान अक्सिजन सिलिन्डर बैंकको अभियानलाई सहयोग गरेको हो । लुगा आवयश्कता भएका गरिव विपन्नहरुका लागि लुगाको व्यवस्था गर्दै आएको बैंकले कोभिड १९ महामारीका बेला अस्पतालमा बेडको अभावमा होम आइशोलेसनमा रहेकाहरुलाई निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श र आवयश्क रहेकालाई निःशुल्क अक्सिजन सिलिन्डरको समेत व्यवस्था गर्न थालिएको अभियान अन्तर्गत बैंकले आज थप १० गरि अहिले सम्म कुल २२ अक्सिजन सिलिन्डर हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
अभियानको अक्सिजन व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव तथा बैंकका समेत सचिव रहेका मनिष झा श्री ओमको पहलमा सो सिलिन्डर सहयोग वापत प्राप्त भएको छ । पोर्भटी संस्थाका अध्यक्ष डा. शैलेन्द्र झा अभियानको चिकित्सक टोलीका सदस्य समेत हुन । उनले सहयोग गरेको एकलाख रुपैयावाट ई सिलिन्डरहरु खरिद गरिएको छ ।
चिकित्सकको निगरानी र परामर्शमा रहेका संक्रमितलाई चिकित्सककै सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले सो अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि बैंकले पहिलो चरणमा १२ अक्सिजन सिलिन्डर हस्तान्तरण गरेको थियो । बैंकका अध्यक्ष राजिव झाका अनुसार अहिले सम्म दाताहरुवाट कुल ६० वटा सिलिन्डरको प्रतिवद्वता आइसकेकोमा २२ वटा प्राप्त भइसकेको छ ।
धनुषावाट सुरु भएको अभियानमा प्रदेश २ का आठवटै जिल्लाका संक्रमितहरु जुडन थालेका छन् । अभियानको सूचनाहरु हेरेपछि अहिले सम्म पर्साका १८, सर्लाहीका ४, महोतरीका २, सिरहाका २ र सप्तरीका २ जना कोरोना संक्रमित चिकित्सकहरुको सम्पर्कमा रहि परामर्श लिइरहेका छन् । त्यसै गरि धनुषाका कुल ३० जना संक्रमितहरु परार्मश लिइरहेको समेत बताइएको छ ।